नयाँ एल्बमको काम अन्तिम तयारीमा पुगेको छ :रुपकुमार राइ
राम साइली सुरु बुरु लाकुरिको लंकै पुग्यो जरा । राम साइली यतिमा राम्री पातलीको लाग्छ नि माया बरा । भन्ने लोक आधुनिक गीत बाट इमेज अवार्ड प्राप्त गर्न सफल गायक हो रुपकुमार राइ । नेपाली सांगीतिक क्षेत्रमा कुनै नौलो नाम हैन रुपकुमार राइ ।दर्जनौ हिट गीत श्रोता माझ ल्याइ सकेका गायक रुपकुमार राइ एक स्थापित गायक हुन् । रुपाकोट र ट्याम्केको काखमा लुटपुटिन्दै साप्सुको छालहरु संग जिस्किन्दै, रावा र सावा संग मितेरी गास्दै उकाली ओराली गरेर उनको बाल्यकाल खोटाङको टेम्मामा बित्यो । सानै देखी संगीतको पारखी उनि गाँउघरमा हुने साँस्कृतिक कार्यक्रममा मज्जाले गीत गाउदै नाच्थे । गायक बन्ने सपना भने कहिल्यै नदेखेका रुपकुमार राइ, मेलापातमा होस वा साँस्कृतिक सांगीतिक कार्यक्रममा होस । गीत गाउन तम्सिन्थे । हुन पनि त हो , पुरै खोटाङ संगीतमय छ । खोटाङको हरेक डाँडा र पाखाहरु बेसिका फाँटहरु अनि झर्ना र छाँगाहरुले गीत गाउछ । चराहरुको चिरविर आवाज संगै हावाको सुसेलीमा वयली खेल्ने धानका बालाहरुले संगीतको आभाष गराउछ । यिनै सांगीतिक वातावरणमा हुर्केका रुपकुमार राइ आफु भित्र आफै संगीतमय भइ दिए । गाउँमै माध्यमिक तहको पढाइ सके पछि सांगीतिक अवसरको खोजिमा राजधानी छिरेको हप्ता दिन भित्रै डोरिम संगीत पाठशालामा संगीतको औपचारिक शिक्षा लिन सुरु गरे । राम साइली भन्ने गीतको बोल बाट इमेज अवार्ड सम्मान पाएका गायक रुपकुमारलाइ त्यतिले मात्र संतुष्ट भएन र अझ सशक्त , हिट गीत दिनको निम्ति भौतारी रहे । यसरी शहरमा भौतारीन्दै हिड्दा गाँउको यादले धेरै सताउथ्यो । गाँउको त्यो चिसो पानी अनि गुन्द्रुक किनेमा सम्झिदै गीत गाएका छन् , यो शहरको पानी मिठो , गाउकै तिर्सना । पठाइ दिनु है आमा , गुन्द्रुक किनेमा । वास्तवमा , गायक रुपकुमारलाइ मात्रै हैन , गाउँ घर वाट शहर पस्ने हरेक मनहरुलाइ गाउँको चिसो पानी अनि गुन्द्रुक किनेमाको यादले सताइ रहन्छ । यसरी सांगीतिक माहौलमा डुल्दा दुल्दै जवान बनेका रुपकुमार कतिबेला थाहै नपाइ कुनै युवती प्रती उनको मोहले बिक्षिप्त बनयो । अनि उनै निस्ठुरी मायालाइ सम्झिदै यसरी भनेका छन् । जुन तारा , मागेको हैन, केवल एउटा साथ न हो । दिन्नौ भने त मेरो के लाग्छ । खुसिनै खुसी मागेको हैन । केवल एउटा साथ न हो । दिन्नौ भने त मेरो के लाग्छ । भन्दै सांगीतिक सागरको अथाह गहिराइमा डुबेका गायक रुपकुमार राइले अब नयाँ एल्बम बजारमा ल्याउदै छन् । हिल्टोन म्युजिक कम्पनी प्रा. ली.को अध्यक्ष रुपकुमार राइ गायक मात्रै हैन, समाजसेवी पनि हुन् । उनै गायक रुपकुमार राइ संग गरिएको कुराकानी ।
१- हिजोआज तपाइ के गर्दै हुनु हुन्छ ?
अहिले म मेरो नयाँ एल्बमको काम गर्दै छु । यसमा चार वटा गीतहरु रहन्छ । यसको लगभग अन्तिम तयारीमा पुगेको छ । यसको अलावा व्यापार व्यावसाय र समाजसेवामा व्यस्त छु ।
२- यो कस्तो एल्बम हो ?
मैले अगाडी निकालेको एल्बमहरु भन्दा यो एल्बम फरक धारको छ । यहा गजल र आधुनिक गीतहरुलाइ संगीत प्राज्ञ शान्तिराम राइ , महेश खड्का र सचिन शिंहले धेरै मेहनत गरेर गीतको शब्दलाइ संगीतमा ढाल्ने काम गर्नु भएको छ । र अर्को एउटा चयन तयार गर्दै छु ।
३- राम साइली भन्ने बोलको गीतले त एक जमानामा त गाँउ शहर मेलापात जताततै , तहल्कै मच्याएको थियो नि । अब त्यस्तै अर्को गीत कहिले सुन्न पाइएला ?
मेरो प्रयत्न त सधै हिट गीत दिने नै हुन्छ । म सबै गीतलाइ उतिकै मेहनत गरिरहेको हुन्छु । तर कतिबेला कुन गीत हिट हुन्छ भन्ने थाहै हुदैन । दुइ चार दिन बजारमा चलेर स्वाट्टै हराउने गीतहरु पनि धेरै छन् । तर म त्यस्तो चाहान्न । सके सम्म सदाबहार गीतहरु गाउन मन लाग्छ । तपाइलाइ थाहै छ , त्यो बेला गाइएका नारायण गोपालको गीतहरु आज पनि उतिकै कर्णप्रीय छन् ।
४- तपाइको नजरमा , नेपाली गीत संगीतको स्थिति कस्तो छ ?
नेपाली गीत संगीत सृजनाको हिसाबले केही हदसम्म राम्रो छ । केही राम्रा गीतहरु पनि आएका छन् । काम गर्ने भिडभाड पनि बढेको छ । सायद समाज नै संगीतमय भएकोले होला । तर फेरी कहाँ के राम्रो आइरहेको छ ? के भइ रहेको छ ? भन्ने लेखाजोखा र मुल्यांकन सिस्टम चाही ठिक छैन । संगीतको स्वरुप र क्याटागोरी ( बर्ग ) ठिक नभएकोले प्रबिधिको विकास र संगीतको पाटो संग व्यवस्थापन नभएकोले ठ्याक्कै यस्तै हो भन्न चाही मलाइ गाह्रो भयो ।
५- तपाइले सांगीतिक माहौलमा लामो समय बिताइ सक्नु भयो । यो समयको लामो अन्तरालमा के कस्तो अनुभुती पाउनु भएको छ ?
सांगीतिक जिवनको अनुभुती बाट सबै भन्दा पहिला त आत्मसन्तुष्टि पाएको छु । अनि संगीतले नै समाजलाइ मार्गनिर्देशन गर्ने भएकोले समाज परिवर्तनको एउटा सशक्त पाटो पनि हो गीत संगीत । नेपालको परिप्रेक्ष्यमा गीत संगीतमै लागेर बाँच्न त गाह्रो छ । सहि ढंगले व्यवस्थापन गर्न नसक्दा सर्जकहरु मारमा परिरहेका छन् ।
६- तपाइको आफ्नै हिल्टोन म्युजिक कम्पनीले भर्खरै बृहत साँस्कृतिक कार्यक्रम २०७३ को सफल आयोजना सम्पन्न गरेको थियो । त्यो कार्यक्रमको खास उदेश्य के थियो ?
त्यो कार्यक्रम विशुद्ध सहयोगार्थ कार्यक्रम थियो । हिल्टोन म्युजिक कम्पनी समाज सेवा गर्ने संस्था त हैन । तर संयोगबस दुबै मृगौला खराब भएको ललिता सुब्बा चाम्लिङको उपचारार्थ सहयोगको लागी साथिहरुले म संग समस्य लिएर आउनु भयो । यसमा मैले नकार्न सकिन । जे जस्तो स्थिति भए पनि जति सकिन्छ , सहयोग गर्नु पर्छ भन्ने लागेर सहयोगार्थ त्यो कार्यक्रमको आयोजना गरिएको थियो ।
७- कति सहयोग गर्नु भयो त ?
हामीले बिरामीलाइ पाँछ लाख दुइ हजार रुपैयाँ दियौ । त्यसमा कलाकारहरु सबैले सहयोग गर्नु भएको छ । राजेश पायल राइले त कार्यक्रममा आफ्नो ब्याक्तीगत पचास हजार सहयोग गर्नु भएको थियो ।
८- प्रसंग अलिकति बदलौ , तपाइको बाल्यकाल कहाँ र कसरी बित्यो ?
मेरो जन्म खोटाङको टेम्मा पाँच खाम्लामा भएको थियो । त्यही उकालो ओरालो गर्दै साथिहरु संग खेल्दै मेरो बाल्यकाल बित्यो । कक्षा दश सम्म गाउमै पढे । त्यही बाट एसएलसी पास गरेर उच्च शिक्षा अध्ययनको लागी काठमाडौ आएँ । काठमाडौ आएको हप्ता दिन भित्रै डोरिम संगीत पाठशालामा भर्ना भए म्युजिजलाइ पहिलो प्राथमिकतामा राखेर अध्ययनलाइ पनि अगाडि बढाए ।
९- तपाइले सांगीतिक माहौलमा बिताएको अनुभुती कस्तो रह्यो ?
मुख्य कुरा त, म जन्मेको गाउँ नै सांगीतिक र साँस्कृतिक कलाले भरीभराउ गाउँ हो । त्यो बेला, मेरो गाउँमा राष्ट्रिय स्तरको कलाकार त कोहि थिएन तर त्यहीको स्थानीय स्तरमा राम्रो साँस्कृतिक माहौल थियो । त्यसै कारण म सानै देखी गीत संगीत प्रती झुकाव राख्थे गाउँमा दसै तिहारमा साँस्कृतिक कार्यक्रम गरिन्थ्यो । त्यो बेला म गीत गाउने भन्दा पनि नाच्ने गर्थे । त्यसरी गाउदा गाउदै नाच्दा नाच्दै , रहरले आज यहाँ सम्म ल्याइ पुर्‍यायो ।
१०- तपाइ एउटा गायक , साथमा ब्यापार व्यावसाय र समाजसेवामा पनि सक्रिय हुनु हुन्छ । तपाइले आफ्नो समयलाइ कसरी व्यवस्थापन गरि रहनु भएको छ ?
यो चाही म आफैलाइ पनि महसुस भएको कुरा हो । म आफैलाइ पनि कस्तो कस्तो लागीरहेको छ । तर व्यापार व्यावसाय भन्दा पनि मेरो प्रमुख बिषय भनेको गीत संगीत नै हो । म हरेक समय गीत संगीतलाइ नै सोची रहेको हुन्छु । समाजसेवा भनेको मेरो भावाना हो । मेरो चेतनाले भएको हो । व्यापार व्यवसाय भनेको चाही मेरो बाध्यता हो । तर अब चाही, एक तर्फी तरिकाले गीत संगीतलाइ नै अगाडी बढाउने सोचमा छु ।
११- अब तपाइको भावी योजनाहरु के कस्ता छन् त ?
व्यवसायलाइ एक ठाउँमा व्यवस्थित गरेर आंशिक समय मात्र व्यापार व्यवसायलाइ दिन्छु । समाजसेवा भनेको आफुमै भइरहने कुरा हो । म अब प्रत्यक्ष गीत संगीत मै लाग्ने छु । अहिले सम्म मैले जति गीत गाएको छु । त्यो भन्दा राम्रो र फरक धारको गीत गाउने छु । संगीतको गहन अध्ययन गरेर नयाँ ढंगले अगाडी बढ्ने छु । रुपकुमार राइले छुट्टै आयम के दिन सक्छ त भन्ने बिषयमा सोची रहेको छु । नयाँ एल्बमको काम लगभग तयार भइ सकेको छ । तयार भएका गीतहरुमा शब्दहरु राम्रा छन् । संगीतकारहरुले पनि धेरै मेहनत गरेर काम गरि दिनु भएको छ । यो एल्बममा रहेका गीतहरुले नयाँ आयाम थपेको छ । अब चाडै नै बजारमा आउदै छ ।सबै जनालाइ म के भन्न चाहान्छु भने, एक पटक सुनेर राम्रो नराम्रो , कमीकमजोरी छुट्ट्याइ सुझाव सल्लाह दिनु होला । रुपकुमार राइले तपाइको सुझाब सल्लाहलाइ हार्दिकताको साथ स्वीकार गर्नेछ ।
प्रस्तुतिः इन्द्र जिजीविषा
राष्ट्रले मलाइ के दियो भन्दा पनि मैले राष्ट्रलाइ दिएँ भन्ने लाग्छ मलाइ : मिरा राइ
म्यानपावर एजेन्सीहरुलाई शाखा कार्यालय खोल्न दिने